स्वार्थी मानव, तिमी बुझ्ने प्रयत्न गर ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
फेरि तिमीलाई सम्झे !
मलाई थाहा छ अहिले तिमी बन्दा बन्दीमा घर भित्र छौ।अल्लि अगाडी तिमीले आफ्नै चुलबुले मनलाई पनि पत्र लेखिरहेको थियौ। त्यो पत्र पनि पढ्ने मौका पाएको थिएँ। आज भने मैले तिमीलाई यो पत्र मार्फत केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। यो पत्रमा मैले भनेका सम्पूर्ण कुरालाई मन देखी नै मनन गर है।
तिमी बुझ्ने प्रयत्न गर। कुनै बेला डाइनोसर पनि यो संसारमा राज गर्थ्यो । तर आज खोइ त्यसको राज्य ? तिमीलाई थाहा छ ? प्रत्येक दिन तिम्रो कारणले हजारौँ बोट बिरुवा , चराचुरुङ्गी, कयौँ पुतली र हजारौँ हजार अन्य जीव -जन्तु लोप हुँदै छन्। के तिमीलाई लाग्दैन त्यसको प्रत्येक कारण तिमी हुन सक्छौ भनेर। तिमी कति स्वार्थी र कति नीच छौ? तिमीलाई देखेर मलाई लाज लाग्छ त कहिले हाँसो उठ्छ तर के गर्ने मैले जति सम्झाए पनि तिमी सुन्ने वाला छैनौ। आफ्नो मात्र व्याख्या गर्ने र आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने तिमी कति निर्दयी ।
तिमीले छर्केका विषले प्रत्येक दिन हजारौँ भमरा र भगेराहरु मर्न सक्छन् भन्ने तिम्रो सोचमा आएन होइन ? के यो तिम्रो स्वार्थ होइन ? छि ! छि। के तिमीलाई मेरो बारेमा सबै जाने जस्तो लाग्छ ? के तिमीले मलाई साँच्चै चिनेका छौ त ? मलाई लग्दैन । तिमी कति सम्म कमजोर भई सक्यौ कि तिमीले तिम्रो शुक्रकीट र डिम्बको भरपुर प्रयोग गर्न समेत सकेनौ। म त चाहन्थे यो संसारमा अहिले सम्म करिब ५० अर्व मान्छे हुनु पर्थ्यो। तर खोइ ? तिमी गली सक्यौ। तिमीसँग केही छैन। कति नराम्रो बानी तिम्रो। न अरूलाई बाच्न दियौँ न आफू नै सफलता पूर्वक बाँच्यौ। तिमीले मलाई बुझ्न सकेनौँ।
सुन, नत्र यति धेरै राज्य किन बनाएको ? यति धेरै अड्डा अदालतको निर्माण के का लागी ? तिमी बाहेक मेरा अन्य सन्तानलाई त यति धेरै नियम त चाहिएको छैन त। हेर न त्यो साइबेरियाको चरा बिना भिसा कसरी त्यो नेपाल भन्ने देश आइपुग्छ। तिमीले मेरो सम्पत्ति माथि लुछा-चुडि गर्न पैसा बनायौँ होइन ? के काम छ त्यसको ? च्यतिदेउ । नाफा पाएपछि आफ्नो आमा समेत मार्न तयार तिमी थुक्क! तिमीले बनाएको आर्थिक साम्राज्यवाद त्यही होइन ? खै त मेरो अगाडी कति दिन टिक्न सक्ला र यो । मलाई थाहा छ तिमी पसिना पसिना छौ । तिमीलाई विज्ञान को विकास गरेको घमन्ड होला । त्यो त तिमीले मेरा लाखौँ लाख रहस्य मध्य केही लाई बुझ्ने कोसिस गरेको हो तर कति बुझेर सक्छौ ? म धेरै गहन छु यति धेरै रहस्यमय छु।
प्रिय मान्छे, धेरै समय खेर नफाल । बरु सक्छौ भने मेरो सेवा मात्र गर र मेरो भक्तिमा लाग। त्यसमै तिम्रो हित छ। तिमीले अति गरेपछि कहिलेकाहीँ रिसाउन मन लाग्छ। तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य प्रति सजग गराउन अहिले तिमीहरू सामु मैले मेरो दूत पठाइ दिएको छु। अलि कडा छ मेरो दूत सायद। त्यही भएर होला तिमीले उसलाई कहिले सार्स भन्यौ कहिले मार्स भन्यौ अनि अहिले कोरोना भनेका छौ। जे नाम दिए पनि उ पनि मेरै अङ्ग हुन। नडराऊ। केही हुँदैन। मलाई थाहा छ तिमी फेरि एक पटक यिनलाई मार्ने औषधि समेत बनाउन तम्सिरहेका छौ। ठिकै छ कोसिस गर। मेरो सन्सारमा हरेकले बाच्न सिक्नु पर्छ ।
प्रिय मान्छे, हो तिमीसँग एक मात्र विकल्प छ कि तिमी मेरो संरक्षक बन्नु। तर मलाई थाहा छ तिमीले यो विकल्प मान्ने छैनौ बरु मेरो रिस शान्त गर्न तिम्रा अन्य कृत्रिम उपायको प्रयोग गर्दै जान पनि सक्छौ। त्यो पनि मेरै रहस्यको खोजी हो गर। तर बुझी राख म मेरा सबै सन्ततिको सन्तुलन म आफै मिलाउँछु। त्यसैले मेरो नाम तिमीले नै प्रकृति राखेको होइनौँ ?
तिमीलाई भयो थाहा होला नि अब त , तिमी १० मिटर दौडिदा म १०० मिटर दौडिन्छु भनेर। त्यसैले तिम्रै मानव जातीका ती डार्बिन भन्ने बुढाले प्रकृतिले बेला मौकामा आफै काटछाट गर्छ भनेर भनेका थिए। बुढाको बिचार अनुसार नै मैले कोरोना भन्ने दूत पठाइदिएको हुँ। तिमीले मलाई नसोधी बनाएका आधुनिक खानपिनले सायद तिमी धेरै कमजोर भएका छौ। तिम्रो पैसासँग साटिएका तिम्रा आहारले तिमी गलेको बेला यो मेरो नाथे दूत सँग लड्न हम्मे हम्मे परी रहेको होला। अहिले तिमी महिना दिन भन्दा धेरै आफ्नो घर भन्दा बाहिरा निस्केको छैनौ र केही समय अझै भित्रै बस्ने वाला छौ तर निस्के पछि एक पटक म तिर फर्केर हेर। सायद त्यति बेला सम्म मेरो न्यायालयले तिमी माथि एक पटक लाई दया गर्देला।
धेरै दुखी नबन , माया लाग्छ तिम्रो । बानी नराम्रो भए पनि तिमी पनि मेरै सन्तान त हो नि। तर के गर्नु तिमीले मलाई रात दिन आक्रमण गर्दा मैले पनि त कहिलेकाहीँ प्रतिकार गर्नु पर्‍यो नि। मलाई थाहा छ यती नगरेको भए तिमी सुध्रने त कुनै सङ्केत नै थिएन। अब त केही सोच्लाउ कि ? अब आमा माथि आक्रमण नगर। प्रकृति तिम्री आमा हुन। माया गर। संरक्षण गर।
सुन्दर प्रकृति- दिवस खनिया